Zidane Oo Ogolaaday In Uu Tababare U Noqdo Real Madrid
HomeWararka MaantaZidane Oo Ogolaaday In Uu Tababare U Noqdo Real Madrid
Zinedine Zidane ayaa markii ugu horreysay ogolaaday in uu la wareego xilka tababaraha kooxda Real Madrid haddii uu madaxweynaha kooxdaas Florentino Perez ka dalbado.
42 jirkan oo ah macallinka kooxda heerka labaad ee Real Madrid ee lagu magacaabo Castilla ayaa la sheegay in loo carbinayo in uu noqdo macallinka kooxda koowaad ee beddeli doona Carlo Ancelotti mustaqbalka.
Zidane oo u warramay Canal+ ayaa waxa uu sheegay in haddii la siiyo fursadda uu ku noqonayo tababaraha kooxda koowaad uu markaaba la boodi doono, waxaanu yidhi: “Haddii la iisoo bandhigo booska tababaraha Real Madrid, dhab ahaan waan ogolaanayaa, laakiin tababaraha wakhtigan ayaa shaqo kasta qabanaya. Waxa aan ku jiraa jaranjaro walina waxbaan baranayaa.
“Miyaan diyaar u ahay? Waligaa diyaar ma noqonaysid, xattaa adiga oo ah haddii lagu weydiiyo maya ayaad odhanaysaa. Markii ay ciyaartoyga ahaa, ma illoobin laba sannadood: waxyaabo dhacay, iyo tababarenimada oo sidii uun aan loo illoobi doonin.
“Waxyaabo badan ayaan ka bartay Carlo, waanu ogyahay waxa aan isaga u haysto. Waa tababaraha ugu habboon ka sokow waxa ay dadku yidhaahdaan.” Ayuu yidhi Zidane.
Zinedine Zidane oo ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta sannadkii 2006 ayaan wali noqonin tababare koox heerka koowaad ah inkasta oo uu sannadkii hore ahaa tababare ku-xigeenka Real Madrid ee ku guuleystay Champions League.
Laacibkan oo khadka dhexe uga ciyaari jiray Real Madrid, ayaa waxa kale oo uu kaaliye u noqday Jose Mourinho intii uu joogay Santiago Bernabeu, waxaanu sheegay in Mourinho uu yahay tababare ixtiraam badan.
“Mourinho waxa aan ka bartay in aan marnaba la is-dhiibin. Sida uu wax u wado ayaad la yaabaysaa, laakiin waa tababare wanaagsan iyo shakhsi adag.” Sidaas ayuu yidhi Zidane, waxaanu intaaa raaciyey in Mourinho uu wax walba u sameeyo ciyaartooyadiisa darteed.
Zidane waxa kale oo uu ka hadlay sida uu u arko tababare Ancelotti iyo waxyaabaha uu ka bartay, waxaanu yidhi: “Ancelotti wuu ka duwan yahay Mourinho. Waa aabbo deggan oo u naxariista ciyaartooyadiisa, waanu Samir badan yahay, laakiin wuxuu ogyahay mararka qaarkood loo baahan yahay in ad-adayg la muujiyo.
“Maamulka dadku waa waxyaabaha ugu adag tababaraha. Waan garanayaa sida uu yahay qolka lebbiska ee kooxdu, waxa ugu adagnina waa in aad kooxda maamusho, waa sida ganacsi oo kale. Mararka qaarkood waa in aad adkaato, mararka qaarkoodna ay ciyaartooyada isku deyso keligood. Ciyaartoy kaliya ayaa khalkhal ka dhex abuuri karaya kooxda, waase in ay jiraan shuruuc la raaco.” Sidaas ayuu yidhi Zidane.
Weerarka Halista Ah Ee Liverpool Oo Jarjaray Southampton
PSG oo Rikoodheyaal Ku Ciqaabtay Marseille iyo Ibra Oo Galay Tariikhda kooxdiisa